Nbudata nbudata ụgbọ elu Boeing 747-8i Air China FSX & P3D - Rikoooo
downloads 28 640
Abịa Boeing 747-8I Air China na mma VC. China eze ghọrọ ke 2014 ụwa nke mbụ aku ike n'ihu nke United States, ọ bụ nkịtị maka Rikoooo ịrara a mkpọ, chikọta na Ndị nhazi Chris Evans.
Air China bụ nanị mba ụgbọelu nke Civil Aviation nke China, bụ onye so Star Alliance, ndị kasị ibu ụgbọelu njikọ aka na ụwa.
Kpakọtara ma kwalite maka FSX ya na B747 VC mebere (kochie kochi 3d) sitere na Alejandro Rojas Lucenda. Nke a bụ Ihe Nmegheri Nhazi FSX ihe atụ nke Boeing 747-8i GenX ụdị, yana ịgụnye ije ozi ala, steepụ (FSX - Gaa na Nlele - Ngwunye Ngwuta -Posky Utility), mmeghe imi na ihe ndị ọzọ. Agụnyere ụda CF engine sitere na BrandonG, ya na jet whinere iji mee ka ụgbọ elu gị dị elu. Eweliri elu site na iji Boeing 747 VC nke oma site na Alejandro Rojas Lucena / FSND (Lee docs panel maka nkọwa). VC gụnyere FMC, EICAS, MFD nwere ogwe njikwa, GPWS, wipers na-arụ ọrụ, ọkụ ụlọ, mgbachi ọkụ, mgba ọkụ avionics, ịgbanye ọkụ, ọkụ ọkụ na-agbanye, ọkụ taxi, jenjin igwe ọkụ, APU jenerato, igwe ọkụ batrị, igwe ọkụ, dj ihe ngbanwe ice, ọkụ na-agbanye. Daalụ maka Project Opensky maka onyinye ha pụtara ìhè nye ọgbakọ zuru ụwa ọnụ nke ịme anwansị ụgbọ elu. Edegoro m ihe odide ikuku Air China nke Stian Svensen dere. Ọzọkwa tinye Boeing 747 VC textures nweta nkwalite. Nke a na-eme nghọta sara mbara nke 747 n'ime ime mmiri afọ ime.
Onye edemede: SkySpirit2011, Alrot, Achịkọtara ma degharịa maka FSX nke Chris Evans & Enrique Cornejo dere
Boeing 737-MAX8 Otutu-Livery FSX & P3D 1.03